बैंक तथा वित्तीय सं’ स्थाबाट ऋण लिन चाहनेलाई दु: खको खबर ! – Ap Nepal
बैंक तथा वित्तीय सं’ स्थाबाट ऋण लिन चाहनेलाई दु: खको खबर !
जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण सोमबारदेखि बन्द भएको छ । कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ग्राहकले जग्गा धितोमा ऋण लिन नपाएका हुन् ।
‘खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नेपर्नेछ,’ मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’
उल्लिखित निर्देशनलाई देखाउँदै सोमबार र मंगलबार मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न नमानेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनाएका छन् । तोकिएको मापदण्ड अनुसार वर्गीकरण भएपछि मात्र बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो/बन्धक पारित गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने मालपोत कार्यालय कंलकीका प्रमुख हरिकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘मन्त्रालयले २७ गते परिपत्र गर्‍यो, उक्त दिन शुक्रबार र त्यसपछि लगातार २ दिन बिदा थियो, सोमबारदेखि जग्गा रोक्का राख्ने काम बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गा रोक्का हुँदैन ।’
राष्ट्र बैंकले आज सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नियमित छलफलका लागि डाँकेको छ । सो छलफलमा पनि प्रमुख कार्यकारीहरुले यसबारे कुरा उठाउने भएका छन् ।
Prevदुई दिनमा यसरी घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ त कारोबार ?
Nextमेयर बालेन र हर्कलाई अमेरिकाबाट आयो यति ठूलो सम्मान